Maalinta: Diseembar 7, 2019
Kalaca KARDEMİR Waxaa La sii daayay; KARDEMİR, maalmihii la soo dhaafay si isdaba joog ah waxaa looga hadlay 'warshad quwadda kuleylka ah' oo dadweynaha ka sameysay war-saxaafadeed ku saabsan. KARDEMİR olup Waa xarun gaasaska wasakhda ah loo beddelo tamar koronto iyo [More ...]
Waa in lagu soo daro Wadada Tareenka Xawaaraha Sare ee Düzce; Iskudayo ayaa ka socda magaalada Ankara ee Mashruuca Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare, kaasoo yareyn doona wadada Ankara-Istanbul illaa saacadaha 1,5, iyada oo loo sii marayo Düzce. Guddoomiyaha Gobolka MHP Caboğlu, Düzce'yı [More ...]
Xilliga waxaa la furay xaflad aad u qurux badan oo lagu qabtay Xarunta Palandöken Ski Center. Selami Altınok, Gudoomiyaha Gudiga Amniga iyo Sirdoonka ee Golaha Qaranka Qaranka Turkiga, Gudoomiyaha Gobolka Erzurum Okay Memiş, Duqa Magaalada Erzurum Metropolitan Munhmet Sekmen, AK Party Erzurum [More ...]
Wadada tram nostalgic ee u dhaxaysa Yenicami iyo Millet Garden ayaa loo fidiyay Xarunta Agora. Waxaa jiri doona baarkinka labada saldhig iyo taraamyada gobolka .. Duqa Ekrem Ekrem [More ...]
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Ankara iyo Arifiye (Sakarya) inta udhaxeysa tareenada xawaaraha dheereeya (YHT) ma joojinayaan saldhigyada gaadiidka si ay ula kulmaan baahida loo qabo gaadiidka ka baxa Bosphorus Express wuxuu bilaabi doonaa mar kale berri, ayuu yiri. Turhan, [More ...]
Saacadaha Shaqada Gawaarida Uludağ Waa la beddelay. xarumaha ugu dalxiiska muhiim Turkey ee xilliga qaboobaha iyo mid ka mid ah dabeecadda halka aan u jeestay cad Uludag, kuwaas oo noqon doona baabuur cable in ay digniin shirwaynaha a yimid kortaan saacad cab la 140 500 [More ...]